Words With Friends - Android အတွက်အခမဲ့ APK ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့ Play
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့ APK ကို Play
အခုတော့အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ပျေါတူဂီဘရာဇီးလ်နှင့်ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်အတွက်ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးမိုဘိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂိမ်းကစား။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားပျော်စရာ, သင့်စကားလုံးအဆောက်အဦကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ကြသည်ရှိရာအခမဲ့လူမှုရေးစကားလုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းရန်သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများသည်ကိုစိန်ခေါ်မယ်သို့မဟုတ်စမတ်ပွဲစဉ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ပါစေ။ အော့ဖ်လိုင်းတစ်ကိုယ်တော် Play စနှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုထက်မြက်ဖို့အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆို Play ။ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဝင်းမေ။ ™
• In-ဂိမ်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Chat
•နေ့၏အဘိနဲ့ Word နှင့်သင်၏အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ Expand
•ထင်နှင့်အစာရှောင်ခြင်း Play စနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်လိုပိုမြန်ကစားရန်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်
•သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်ပြိုင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပွဲစဉ်အတွက်ကစားသမား '' profile များကို browsing အားဖြင့် FIND
•သင့်ဖုန်း, တက်ဘလက်, နှင့်ကွန်ပျူတာ * အပေါ် ACCESS သင့်ဂိမ်းများ
သင်ယခင်ကဆိုမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် * ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကား Play ။ Facebook မှာဒါမှမဟုတ်သင်ရွေ့လျားအကြားတတိယပါတီကြော်ငြာများမပါဘဲကစားရန်ဆက်လက်ယခင်ဝယ်ယူစေရန်အသုံးပြုသောအီးမေးလ်အကောင့်နဲ့ login ရန်သေချာစေပါ။
ယခုပင်လျှင်တစ်ခုအောင်မြင်သော Wordie? ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဂိမ်းသတင်းများ, ပြိုင်ပွဲ, ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပိုပြီးအပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နေဖို့ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာလိုပဲ။
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာကိုချစ်! မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသလား? ဒီမှာမေးပါ: http://zynga.tm/d01Tx ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ဦးအကြံပြုချက်ရှိသနည်း ဤနေရာတွင်မျှဝေပေးပါ: http://zynga.tm/r02dY
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားကစားဘို့အ Thank you!
•ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်း of Service ကို Zynga စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော License Agreement ကိုလယ်ပြင်မှတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, http://m.zynga.com/legal/terms-of-service မှာ။
•ဒီဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် In-app ကိုဝယ်ယူနောက်ထပ်အကြောင်းအရာနှင့်ပရီမီယံငွေကြေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ in-app ဝယ်ယူမှု $ 0.99 ကနေ $ 99.99 အထိ။
•ဤဂိမ်း Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များ, ချိတ်ဆက်ရန်, ဤဂိမ်းကစားသည့်အခါထိုကဲ့သို့သောကစားသမားအခြားလူများနှင့်အဆက်အသွယ်သို့မဝင်စေခြင်းငှါအဖြစ်အသုံးပြုသူခွင့်မရှိ။
•သင်ဒီဂိမ်းထဲမှာ ချိတ်ဆက်. လူမှုကွန်ယက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များသည်လည်းသင်တို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Zynga, Inc နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်ထံမှအထူးကမ်းလှမ်းချက်များ, ဖြစ်ရပ်များ, နှင့်အစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်။
•ကစားရန် 13 + ဖြစ်ရမည်။
•ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းသူငယ်ချင်းများအကောင့်နှင့်အတူတစ်ဦးက Facebook သို့မဟုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲလိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ဘာဂ်နှင့်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို updated င့်!
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစကားများ - အခမဲ့ Play
79.63 ကို MB